About Us - HD Medical Teknolojia mpiara., Ltd
HD Medical naorina tamin'ny 2000, dia avo-teknolojia vaovao, orinasa izay misahana manokana ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra sy Ankehitriny-varotra fanompoana ho an'ny fitaovana fitarafana-pitsaboana vokatra. HD Medical izay no lasa ny fanamarinana ISO 9001 ny iraisam-pirenena sy ISO 13485 fitantanana tsara rafitra, dia manana 20 karazana patanty fananana ara-tsaina tsara fanamarinana.
Ny vokatra dia zaraina ho Medical DR andian-dahatsoratra sy Animal DR andian-dahatsoratra. Ny ara-pitsaboana Anisan'ny andian-dahatsoratra DR Hifantohan'ny fomba RD andian-dahatsoratra, Mobile RD andian-dahatsoratra, Radiography fisaka fandriana RD andian-dahatsoratra, Portable RD andian-dahatsoratra, Dynamic fisaka fandriana RD andian-dahatsoratra, Ara-batana fandinihan fiara fitateram-bahoaka sy ny sisa. Animal DR ahitana andian-dahatsoratra High Pet farany RD, tsotra sy mora Pet RD, RD fanompoana vaovao, Pet X-ray fitaovana, Veterinary loko fitarafana, Veterinary MRI, Veterinary fandriana fandidiana andian-dahatsoratra sy ny tetikasa fiarovana sns miteraka ihany koa izahay roa karazana singa RD Milina ho DR.
HD Medical manasa fahafahana misafidy amim-pahatsorana mpizara manerana izao tontolo izao.